I-Apricot yasendle: Iplatifomu yobulungu ehlawulwa ngayo yonke into
Enkosi ngala macebiso. Bekucaphukisa ukubanazo kwizibalo zam.
Ngomhla wama-1 ku-Disemba 2015 ngo-5: 27 PM
Uyabheja. Sihlaziye isisombululo esichanekileyo koku kuba abathumeli abathumeleyo abade beze kwindawo yakho.
Uncedo olugqithisileyo loSpam (@RefSpamHelp)
Besinokucaphukisa nogqithiso lokuthumela ugaxekile. Sizamile ezinye "izisombululo" ezifunyenwe kwiwebhu - btw htaccess-manipulaton ayithinteli kwiziporho ezibhekisa- -, sichithe ixesha elithile ngokwenza izihluzi ngesandla kwi-GA kwaye sakha isisombululo sethu esizenzekelayo: http://www.referrer-spam.help ...
Siyathemba ukuba uya kuyithanda.
Ngomhla wama-1 ku-Disemba 2015 ngo-5: 28 PM
Kwaye kubonakala ngathi iziporho ezibhekisa kuye ziye zaba ngumdlali ophambili. Sihlaziye ingcebiso kule ndawo. Enkosi ngalo lonke uncedo olunika!
Ngomhla wama-1 ku-Disemba 2015 ngo-5: 29 PM
Uyabheja. Sihlaziye iingcebiso ngokubhekisele kwindlela entsha yokudlulisa iziporho ezisetyenziswayo.
Isiqwenga soncedo apha, enkosi! Ngoku ulinde ngomonde utshintsho lwezinga lokuhlawula 😀
Ngomhla wama-1 ku-Disemba 2015 ngo-5: 50 PM
Ndihlaziye ingcebiso yokubonelela ngecandelo loHlaziyo lukaGoogle. Ngale ndlela unokubona ifuthe ngokukhawuleza.
Agasti 5, 2015 ngo-4: 21 PM
Yimicimbi yokugaxeka / yokuhla komyalezo ongafunekiyo eyoyikisayo: Abenzi bokugaxekile bayayifaka kwi-spam kwaye emva koko banikezele ngoncedo- oko kukuqagela kwam.
Ngaba ukhe wakhangela iibhloko ze-IP okanye nantoni na ukubona ukuba kukho uluhlu lokuzifumana?
Ezinye iimbono ndizama ukubona ukuba abanye bazamile:
1) Ndiza kuthi ukuseta kwakhona ikuki ukuze ubenexesha elide leseshoni njengotyelelo kodwa i-bots iya kuqhubeka nokujonga indawo. Ezi zinto zifuna ukuphathwa njengokuhlaselwa kwe-DDoS ngenxa yendlela abakhupha ngayo izixhobo ezibonakalayo
2) Yenza iprofayili entsha kwaye ubeke ikhowudi entsha kuMphathi weTek kuGoogle ukuze ikhowudi kungabi lula ukuyikroba. Kwakhona ukwenza iakhawunti entsha kunye nokwenza iiprofayili ezi-4 ukuze inani lokugqibela lingapheli -1 lolunye uqwalaselo. Kodwa, ndiyaqikelela ukuba okwangoku abenzi bokugaxekile bavelisa ngokuzenzekelayo iinombolo ze-UA okanye bawahoya amanani e-UA xa bebonke kunye nokusebenzisa iphulo lokwakha isixhobo se-url
Molo, isikhokelo esihle, ndakhe isixhobo sasimahla esifikelela kuhlalutyo kwaye sakha ifayile ye-htaccess kwindawo yakho, yasimahla http://refererspamtool.boyddigital.co.uk/ yinike
Agasti 14, 2015 ngo-10: 20 PM
UColin, esi sisixhobo esimnandi! Ndiza kuyongeza kwisithuba!
Ngomhla wama-8 ku-Disemba 2015 ngo-4: 50 PM
Izinto ezintle, uDouglas.
Ngomhla wama-8 ku-Disemba 2015 ngo-5: 50 PM
Iluncedo kakhulu…. Olu hlobo lokugcwala kogaxekile sesona sizathu siphambili sokulahlekisa iingxelo kwii-analytics, ezingancediyo ukubonisa abathengi ukuba isiza siqhuba njani.
enkosi iwebhusayithi yam igcwele ugaxekile kwaye iAddense indivimbile
Spam isiba ngumcimbi omkhulu kule mihla. Nangona kunjalo, esi sithuba asihambelani nesiza sakho okanye abantu bayayigcina indawo yakho. Benza iGoogle Analytics. Ayifanelanga ukuba nefuthe kwiAdsense yakho konke konke, kodwa iya kuyiphazamisa iGoogle Analytics.
Ndonele nyani yile spam. Ndiyathemba ukuba izakundinceda.
Nam ndinjalo. Andikholelwa ukuba uGoogle khange eze nesisombululo soku.
Isiqwenga esikhulu, bendinengxaki kule idlulileyo kwaye uninzi lwabantu lubonakala ngathi alunalo nofifi lokuba iyaqhubeka!
Enkosi kwaye ndiyavuma… enyanisweni bendingazi ukuba kuqhubeka ntoni ixesha elide, nokuba!
Enkosi ngenqaku lakho uDouglas. Kufundwe kakuhle. Ndiyicaphukela kwaphela into enogaxekile, ibangele iingxaki ezininzi kwiiwebhusayithi zam ngaphambili, ngamanye amaxesha ibangela ukuba iisayithi zam zamagama zingqubeke xa bendinenguqulo endala ye-wordpress.
Ngokuqinisekileyo ndiza kwabelana ngeli nqaku kwindawo yam.
Ngoku ndiqala ibhlog ye-wordpress kubathengisi.
Molo Douglas .. ndinombuzo omnye. Ndifumana utyelelo ezimbalwa com.google.android.googlequicksearchbox / .com
Ngaba oko kubandakanya ugaxekile? Enkosi ngempendulo yakho
Molo Fauzy, ndiyakholelwa ukuba sisalathiso esisemthethweni esivela kwi Usetyenziso lweselfowuni lukaGoogle.
Kutheni le nto ukuthunyelwa kwesiporho kusenzeka, yintoni abaphuma kuyo abo bagaxekile?
Kuyinyani ngokwenene. Isibonelelo esisodwa kukuba abasebenzisi be-analytics abangenabunkunkqele baya kufuna isalathiso kwaye banokuthenga iimveliso okanye iinkonzo zabo. Yindlela enexabiso eliphantsi kwaye engenangqondo yokuzama ukukhohlisa abanini besiza abangenalwazi kangako.